Veset: Makes Cloud BroadcastingaReality | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner and Producer of NAB Show LIVE. Broadcast Engineering News
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Veset: တိမ်တိုက်တစ်ခု Reality ထုတ်လွှင့်ကို
Veset: တိမ်တိုက်တစ်ခု Reality ထုတ်လွှင့်ကို
Veset သင်၏သခင်ကိုထိန်းချုပ်ကစားထွက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဆန်းသစ်သောမိုဃ်းတိမ်အခြေစိုက်စခန်းကွန်ပျူတာအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်အတူရှေ့သို့ရွေ့လျားနေဖြင့်ယနေ့အသံလွှင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျအနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှုခင်းအတွက်အဖြစ်ကိုသင်အင်တာနက်နှင့်အတူကမ္ဘာ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့်သင့်ရဲ့ content တွေကိုဖြန့်ဖြူးစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုထားသည်။ အဆိုပါ Veset နယ်စပ်၏အရွယ်မှာမိုဃ်းတိမ်ကိုကစားထွက်ဆာဗာများပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်အကြောင်းအရာကြည့်ရှုအများပြည်သူများအတွက်ဖြန့်ချိရာမှထွက်ရှိဒီဗွီဘီလိုက်နာထုတ်လွှင့်အချက်ပြနေတဆင့်လမ်းကြောင်းများ 1 မှ 50 ကိုပံ့ပိုးသောဖြည့်စွက်၏အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကစားကွင်းသို့ပြောင်းလဲနေသည် ဂြိုဟ်တု ထုတ်လွှင့်-ပြန်လည်နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုး headend မှ IP ကိုကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ။
အဆိုပါ Veset တိမ်တိုက်ထုတ်လွှင့်အတွက်အထဲက play ဆာဗာတစ်ခုအဆင့်မြင့် TITLE အင်ဂျင်နှင့်အန်ကုဒ်ထောက်ပံ့ SD ကပါဝင်သည်နှင့် HD အဆိုပါ 1080p 60fps သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောလမ်းကြောင်းများ။ ထိုကဲ့သို့သော ProRes 422, MXF OP1a, XDCAM, H.264 / AVC, နှင့်အမွေကို formats အဖြစ်အားလုံးအဓိကကဗီဒီယိုကို formats supporting ။ ကုဒ်ထည့်သွင်းသည့်၏ output ကိုထိုကဲ့သို့သော MPEG4 သို့မဟုတ် AVC အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်ပြမှုအရည်အသွေးတွေ2အထိပေးနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ် key ကိုအင်္ဂါရပ်ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်စာရင်းထွက်ကစားသည့်အန်ကုဒ်စတူဒီယိုသို့မဟုတ်လယ်ကွင်းထဲကနေတိုက်ရိုက်စီးကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးသူတို့သည်သင့်ချန်နယ်ပေါ်သို့ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ မိုးတိမ်ထုတ်လွှင့်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်မဖွင့်မျက်နှာစာဟာ့ဒ်ဝဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရှိကြောင်းထဲမှာ, အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအသုံးစရိတ်-per-အသုံးပြုမှုကိုပေးဆောင်, ဖြောင့်ရှေ့ကိုအစာရှောင်ခြင်းနဲ့ရိုးရိုးဖြစ်ပြီး, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, Veset ရုပ်သံလိုင်း signal ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် 24 /7ပေးကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုထောက်ပံ့ပေး နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့!
တစ်ခုကသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကုမ္ပဏီ Veset ၏ cloud-based တီဗီဖြေရှင်းချက်ထုတ် play အဖြစ်ကောင်းစွာသည်မိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံပြီး redundancy ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုကျော်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်တစ်လလျှင်စျေးနှုန်းကတော့ QoS ပေးထားကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်တယ်၏အမှု၌စူပါရုပ်သံလိုင်း backup လုပ်ထားဘို့နှစ်ခုလုံးဝသီးခြားမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးကိုလည်းတစ်ပြိုင်နက်ပြေးနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Veset မိတ်ဖက်များ၏စာရင်း SoftLab-Nsk, CloudProvider, Cinegy, Telia Latvija နှင့်အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးပေမယ့်သေချာပေါက်ဘဲ, မိုက်ကရိုဆော့ဖကော်ပိုရေးရှင်း TV21 များ၏အထင်ကြီးပြီးဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက် (၏ 200m တစ်ဦးကြည့်ပရိသတ်ကိုနဲ့ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ရုပ်ရှင်ရုပ်သံလိုင်းပါဝင်ပါသည်နှင့်ပြန်လည်ဖြစ်ပါသည် ) 600 cable ကိုကွန်ရက်များကျော်အားဖြင့်ထုတ်လွှင့်, chaula.tv (24 အံကေဘယ်တီဗီနေ့စဉ် Live Show ၏နာရီ, ဝက်ဘ်, နှင့်မိုဘိုင်းကြည့်ရှုနှင့်အတူကျောင်းသားများအနေဖြင့်ထုတ်လုပ် operated သောလူငယ်တစ်ဦး7/4တီဗီချန်နယ်) နှင့်ဖိုရမ်ရုပ်ရှင်ရုံများ၏ (တရားဝင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပြသခဲ့သည် Sony က လတ်ဗီးယားအတွက်နိုင်ငံတကာ, Universal Pictures နိုင်ငံတကာ, Paramount Pictures နိုင်ငံတကာနှင့်ဝေါ့ဒစ္စနေး Studios က Motion Picture) ထုတ်လွှရုပ်ပုံများ။
သူတို့က "မြင်တတ်သောယုံကြည်နေသည်" နှင့်တစ်ဦးအခမဲ့အစမ်းဆက်ဆက်ကြောင်းပြီးမြောက်မပိုကောင်းလမ်းကြောင်းပြောပါ! Veset အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကရန် go: www.veset.tv/ တစ်ဦးကအခမဲ့အစမ်းပင်မစာမျက်နှာမှာတှေ့ရှိနိုငျပါသညျ! ပိုမိုသိရှိလိုပါက, တကယ်တော့တွေ့ရှိချက်, ဤဆန်းသစ်သောမိုဃ်းတိမ်ကိုအသံလွှင့်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုသုတေသနပြုဘို့ရန် go: www.veset.tv/products/ ; ဒါ့အပြင်မှာဖျော်ဖြေကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများကိုတွေ့မြင်ကျေးဇူးပြုပြီး: www.veset.tv/case-studies/
ယခင်: ဗီဒီယို Cam မိတ်ဆွေတို့ကိုအဘို့အ Tech မှဆက်စပ်ပစ္စည်း
နောက်တစ်ခု: ဒေါက်ဂလပ်များအတွက် Litepanels Freefall လင်းယုန်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းပြောက်ပြောက်